Xidhiidhka Gobanimadiisa iyo Fankiisa. Mooge. – GEELLE MAG
Home » Faallooyin Muuqallo
“Ku calmadaye inanyahay
Haddaan calaf i kaa siin
Caafimaad ku noollaw
Cid uunbaa ku gaadhiye”
Xadiis ayaa odhannaayay: “Midkiin iimaan la tammadiyo lama imannin, ilaa waxa uu naftiisa la jecelyahay uu walaalkiina la jeclaado” (Scw)
Haddaba, gobanimada, farshaxanka, iyo hibada heeskani ka muuqda kolka aad aragto, miyaannu xadiiskani hubuq kugu soo odhannayn? Wax la isku hanneeyo nolol ayaa u qaalisan, wax Eebbe cid ku arsaaqana dad ayaa ugu mudan. Noloshu waa loolan. Way adagtahay qof loolanka inta uu kaaga tanaasullo, isagu hadyadda hadafkaaga gacanta kaa saarayaa. Waa hubanti in ay naadir tahay shakhsiyaddan oo kale, waa se hubaal in Maxamed biladdaas hantiyay!
Wuxu arkayaa gabadh. Yaab badannaa. Bilcaantani siday u saaqday ayuu ka warbixinnayaa. Waa shalay amintuye, inta uu horba warkiisa u sheegto, miyuu xusuusiyo wixii ay badday?! Oo horta intaannu xusuusin jawigu siduu ahaa shalay. Ala qurux badnaayee; lagama sheekeeyaan. Cirka oo inta uu sagal ku hibaaqday, reexaanta iyo raysku aradka is qabsadeen, jawigan rooxaantu wehelliso, ayay hubqaad toggan iyo hadal toolmoonna ugu dartay. Saw gar maaha kolkaas in ay kashaadu muxibbo la buuxsanto? Adiga oo taas la yaabban, haddana haddii aad ka werwerto calafka ka warran?!
Ilaahay amarkiisa, intaasba isaga oo ka fikirray hal-abuurkani, ayuu hadana warka u caddaysannayaa, oo uu leeyahay ‘ku calmadaye inanyahay’ ababaay. Calmay, cindigiisa wixii yaallayna u sheeg, in aannu ka gaabindoonnin dhankiisana maqashii, laakiin haddii aannu calafba ku yeelan tolaw muxuu yeellayaa? Bal hadda ila yar dhuggo:
Sagalkoo casuus iyo
Ama ubaxa ciiddeed
Casar jamashadii shalay
La cajabbay hubqaadkiyo
Caynkan aad u socotee
Cimri dunida kuma arag
Cid la qurux sidaadee
Ku calmadaye inanyahay
Cadawgaa u noollaw
Cid uunbaa ku gaadhiye!
Muusikada habka socodka raacsan loo tumaayo. La jaanqaadidda codka ee aan marna ka hadhayn. Miisaanka gacantan Eebbe u fadhiisiyay, ee inta ay dananka yaabka leh samayso, haddana aan marna dabaca yeellannayn. Amakaagga codkan mawluhu sida gaarka ah u uummay. Ala meesha maxaa hibo isku barkatay. Cajiib. Intaasba aniga oo la ashqaraarsan, ayaan haddana qaadikari waayay gobanimada midhaha heeskan. Duco ayuunbaa ila gudboonne, inta aan hadalka yareeyo, mar labaad aan heeska innoo shiddo.
Caad iyo ilays iyo
Sida curasha hogolleey
Cadceeddoo badh hoyataay
La cajabbay odhaahdiyo
Codkaad igu salaantee
Carrabkii aad igu tidhi
Cudur kaama gooyee
Iftiinkeeda, muuqaalkeeda, midabkeeda qorraxawga ah, codkeeda dabacsan… Ala carrab wanaagsannaydaa Eebbe kama gooyaan! Intaas haddii ay maankiisa ku xadday, ayuu haddana milgaha gobanimo ku jalbeebinnayaa. Lacalla haddaan ku waayo, caynkaad doontaba ahawoo, Eebbe cadawgaaga kuuma jabiyo, iyo kuwa cawrida kulul. Cid qayrkay ah ayuunbaana ku hannan doonta e, hoodiyo hibo la tammadiyo hanno.
Haddii si dhab ah kaysku jecelyahay, in uu qofba dhankiisa ugu qaadho mooyaanne, hubaal weeyi in aan jacaylku marnaba duugoobayn! Dhaygag badannaa, oo yaa u shedggay in aannu jacaylku duugoobin? Ma ogiye, inta uu waxa dhacay oo dhanba iska ilaawo, ayuu xusuusinnayaa in aannu waligeedna cid dhiggeeda ah, oo noloshiisa kaga danbaysa marnaba la simi doonnin. Afgobaadsi ayaan mooddaayay e, shaw arrintu waaba dhab!! Bal amuurtan ila arag!!
Innuu gaaxdi mooyee
Sidaa kuma gaboobee;
Aniguna gadaal dhalad
Kuma garab dhiggaayoo
Waa hagaag. Aragnay ballanqaadka inanta lagu taxaye, tolaw halkee ayay ka taagantahay noloshiisa kala hadhka calafku kala irdheeyay? Waa tan in badan is wayddiinnaayay anba e, bal hadda codkii Alle ma cadaabaanka mar kale innoogu tuur. ‘dhin’ haye hadda.
Gefna maad samaynnine
Calaf baa halkaa galay
Aad galabta taallee;
Ubad kuu gargaaraan
Ayaan kugu gelbinayaa.
Ax yaa nasab. Eesh calaa. Ka warran qofkaad muuddo wada socoteen haddii uu kaa goosto, walibana inta uu reer kale yagleesho halkaas nolasha ku dakeeyo; oo maxaad yeeli lahayd? Ha ha ha ha, adiga waan ku arkaayo waabad xanaaqday haddadaa, is deji; xanaaq dhawidaa. Anigu kulama yaabbin adigaagan hadda yaabbay, waxaan se la yaabbay ninka intaasi intay ku dhacday, haddana u cudurdaarraya ruuxii naftiisa ka gaabsaday, ee inta uu ka tallaabsaday qayrkii la loollay. Ruuxa gantaalkaas oo ku taagan haddana leh “Gefna maad samaynninne, calafkaa halkaa galay, aad galabta taallee”
Miyaannu istaahilin biladda gobanimada guurka in la siiyo?! Malaha ‘Haa’ la soo booddaye, Alle naxariistii janno ha ka waraabiyo e, Cali Saleebaan Bidde ayaa midhahan ku faro yaraystay, macalinkii codkiisu miciinka ahaana luuqda ayuu ku gergaarray… Yaa kale oo milgaha intan leeg sheegan kara? yaa marwaduu jeclaa oo ka dhaxal wareegtay u dhoollo-caddayn kara? Yaa duco intuu ku ladho, waliba ku odhan kara:
Gelbis iyo go iyo shaal
Hiddaheenna gaarka ah
Ubax gob iyo baar baxay
Ayaan kugu gelbinayaa
Ayaan kugu gelbinayaa’
Haddaba, hal-abuurka, heesaaga, halgamaaga inta aan hoodada deeqsinimadana ugu daro, aan hibada nolosha ee heerka sare ah gacanta u saaro, gadaashiina in aan hoobal la mid ahi dhalan intaan qiro, aan heeraabta heerka sare ah, ee hiyigaaga iyo hanqalkaagaba kicinnaysa kaa durduursiiyo. Heestii gelbis inta aynnu ku nasanno, aynnu hore uga sii dhaqaajinno milgaha hodantinimada iyo deeqsinimada.
“Anigun kumaan gabin
Adna iima goynnine
Haddii guri aad leedahay
Oo lagula aqal galay
Geel iyo gammaan faras
Ayaan kugu gelbinnayaa.
Waxa gola la keennaa
Arrin aad gorfaysoo
Aan gocosho reebayn;
Way garasho waayeel
Haddaan gacan ku siiyee
Anna gob iyo caaddeed
Aad galabta taalee;
Doqonbaan gu iyo dayr
Kala garan mid ay tayoo
Hadba dhinac u guurtee;
Innuu gaaxdo mooyee
Ayaan kugu gelbinayaa”
Cali Saleebaan Bidde
Dhaqanka iyo abuurta aadamaha ayay ka mid tahay. Waa mid hubaal ah in marna laysku naco, marna laysku jeclaado. Iyadaa nolosha indhaw garatada hoggaanka u haysa e, hantidu waa halgaad jacaylka iyo xaqiiqadaba marar badan ka xoog weyn. Waa awood aan ogollayn in cidi la tartanto, waana haayad iskeed halkii ay doontaba nolol uga hawadin karta.
Haddaba, dhaaxa ayuu isaga oo aan magac iyo maal toona lahayn baryayaa. Qajeel ayuu iyada oo hir saaran sida heegada u jeedaallinnaayay. Waaqii ayuu wanaag ka durraamannaayay, wixii uu awoodana u hidinnaayay. Iska daa arrin laga aqballo e, inta uu hadal san ka waayo, ayaa isaga oo wejiga lagu gubbaayo uu iska dhaqaaqaayay. Marar badan way adkayd noloshu, isaga oo mararkaas wanaag ka jirinnayana wuxuu leeyahay:
Imisaan ku hor joogoo
Wanaag kaa haybinaayoo
Iska daa hadal toosane
Warba kaa heli waayey
Oo wejiga aad iga hiiftay?
Wuu xusuusinnayaa. Haatan noloshu sidii maaha. Adduunka ayaa iska hadha e, isaga ayaa maanta halkii saaran, miskiintii dhaaxba loo xiiqsannaana lugihiisa ayay hoos joigtaa. Intii laga tuuggaayay ayay maanta tamanniyaysaa, kanshooyinkii ay hallaysay ayay maanta hadawga u jiidhaysaa. Iyada oo sidaasa ayuu waayihii ay soo marisay qaar ka mid ah sida filimada u daawadsiinnayaa. Wixii ay mutaysatay inta aannay iyadu is xukumin, bal hadda innoo daar siday wax u dhacayaan:
Marbaad hillaac iyo
Mar baad hiraysoon
Sow kii hacoogiyo
Waa kad hallayseen
Kula hor jooggee.
Haddii uu xusuusiyo gafkeedii, iyo sida aannay maanta gargaaris u mutaysannin, ayuu haddana xagga gobanimada isku majeerayaa. Qalbigeeda si uu holaca ku daarmay uga kala bakhtiiyo, ayuu dhagaheeda maqashiinnayaa wax aannay filan karayn, fikirkeedana ku jirin. Iyada iska daaye, in aannu haween oo dhanba dan ka lahayn ayuu xusuusinnayaa!!
Ha mooddin adiguun
Innaan ku hiifee
Haween dhammaan ban
Ka hawl yaraystee!!
Amakaaggan qabsaday intaannay dhannaba ula dhaqaaqin, ayuu gobanimadii aynnu heeska ku soo xulannayna ku jalbeebinnayaa inantii. Ilaahay hortaada iyo meel kastood marayo ha kuu wanaajiyo. Nin hiil, hoodo, hayn, iyo haybadba leh inta uu kugu gallado, adiga oo hanyalsan nabad ku sii hoyo’ ayuu ugu ducaynnayaa, sidaasna mar saddexaad ayuu biladda milgaha iyo gobanimada guurka qoorta u sudhannayaa, si niyad wanaag ahna uu inantii ugu anbabixinnayaa.
Codka sida degennaanta badan loo qaadaayo, iyo kamanka sida culus loo tumaayo haddii aynnu isla gaadhno, inta aynnu shaah u dalbanno tan, hal mar aynnu sida dareenka codku turjunaayo ula niyoodno. Eebbe naxariistii waasaca ahayd hawgu deeqo e, ka durduurta mar kale iyo midhihii heeska.
Hurdo aan ladi waayoo
Aan habeennimo taahayoo
Jaarku uu hugunkaygiyo
Imisaan ku hor jooggayoo
Wanaag kaa haybinnaayoo
Iska daa hadal toosanne
Warba kaa heli waayoo
Wejiga aad iga hiiftay?
Adduun waa hadh wareegga
Waa habeen iyo maalin
Isu soo hirdamaaya
Waa habow iyo toos
Is hareera socdee;
Waayihii kol i heeray
Haddii uu heeryo ku saarray
Innaan kuu han jileecana
Waa mid aan la helaynne
Hiyigaaga ka saar.
Hogob caleen liyo
Adoo hadh jiifay
Habeen ka maalin
Hirrig caddaad iyo
Nabsiga iiga hiishaan
Heedha kula haleeloo
Waa kaad hallayseen
Kula hor joogee;
Mar baad hillaac iyo
Kula hor joogee
Mar baad hubka is wada
Anna hangool iyo
Haddaad i hoos timi
Oon geedna haysan
Was hiil Illaahee;
Kula hor joogee.
Haween dhammaan baan
Ka hawl yaraystee;
Hiil iyo hooba
Mid kuu han weynnoo
Kun hanta mawle
Ha kuu hibeeyee;
Ha kuu hagaajee
Nabad ku sii hoyo
Fg: Labada heesood ee ‘Nabsiga hiisha’ iyo ‘Casar jamashadii’ aannan hubin cidda midhaha lahayd, sidaasna u sheeggi waayay.
Igula ciida Sayidka, faataxadana ha loo maro.
Dhaarinta xildhibaanada Baarlamaanka Labaad ee Jabbaland oo hadda socota